Mogadishu Journal » 2016 » August » 15
Duqii hore ee Muqdisho oo galabta lagu aasay Muqdisho
Mjournal :-Allaha u naxariistee waxaa galabta lagu aasay magaalada Muqdisho Axmed Muude Xuseen oo soo noqday Duqii Magaalada Muqdisho sanadihii 1958-1963. Aaska Marxuum Axmed Muude Xuseen ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiiru dowlaha Cadaaladda Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo horay u...
Xukuumada Soomaaliya oo ka hadashay howlgal laga fuliyay gobolka Jubbada dhexe
Mjournal :-Ciidammada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa lagu magacaabo Danab, ayaa hawl-gallo qorsheysan ka fuliyay Degmada Sunguuni ee Gobolka Jubadda dhexe, kuwaas oo ku burburiyay saldhig ay Al-shabaab ku lahayd deegaankaas iyo koontarool ay lacago ku qaadi jireen....
Golaha tallo bixinta qorshaha qaran oo qodobo soo saaray
Mjournal :–Kadib shir ay maanta ku yeesheen Baydhabo, Xarunta Gobolka Baay ayaa xubnaha Golaha Talo-bixinta iyo Qorshaha Qaranka waxay soo saareen qodobo dhowr ah. Qodobadaa ayaa ah goluhu in uu soo dhaweynaayo hannaanka Qorshaha Qaranka; soo jeedin ah in la xoojiyo...
Ciidammada dowladda federaalka iyo kuwa Puntland oo hub iyo gadiid la qabtay ku soo bandhigay Gaalkacyo
Mjournal :–Ciidamada Kumaandoosta Soomaaliya ee Danab iyo kuwa Amniga Puntland ee PSF, ayaa Maanta Magaalada Gaalkacyo kusoo bandhigay gaari u lahaa Nuur Deeq oo ay sheegeen inuu Al-shabaab u qaabilsana dilalka magaalada Gaalkacyo ka dhaca. Gaarigan oo ah nooca Soomaalidu u...
Wasiirkii hore ee arimaha gudaha oo ka soo horjeedstay xil cusub oo loo magacaabay
Mjournal :–Wasiirkii hore ee Soomaaliland Cali Max’uud Waran-cade oo xalay iskushaandheyn lagu sameeyay xukuumada Soomaaliland ku waayay ayaa iska diiday in uu qabto wakiilka Soomaaliland u fadhin doona dalka Ethiopia. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Maxamed...
Warar dheeraad ah oo ciidammo ka tirsan DF iyo kuwa Mareykanka ah oo howlgal ka wadda fuliyay koonfurta Somaaliya
Mjournal :–Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal gaar ah oo Ciidamada kumaandooska DF oo gacan militari ka helaya ka halaya kuwa Mareykan ah ka fuliyeen koofurta Soomaaliya, afartii maalmood ee la soo dhaafay. Howl galkan ayaa la sheegay in lagu dilay illaa 30...
Madaxweynaha Soomaaliland oo isku shaandheyn ballaaran sameeyay
Mjournal :–Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, ayaa xalay xilli dambe isku shaandheyn balaadhan ku sameeyey golaha wasiirada, badhasaabyadda qaarkood iyo masuuliyiin kale. Isku shaandheyntan oo illaa xalay la hadal hayey, ayaa wakhti la kala seexday la soo...
Usain Bolt oo taariikh cusub dhigay
Mjournal :–Usain Bolt oo ah orodyahanka ugu dheereeya caalamka ayaa taariikh cusub dhigay kaddib markii uu markii saddexaad ee isku xigta uu ku guulaystay tartanka 100m ee Olympic-ada Adduunka. Orodyahankan u dhashay dalka Jamaica ayaa ka hormaray ninka ay aadka u...
Muslimiinta Mareykanka oo Trump ku eedeeyay muslim naceyb
Mjournal :–Kadib dilkii maalin ka hor loo geystay nin imaam ka ahaa masaajid iyo ku xigeenkiisa ayaa Muslimiinta Mareykanku eedeyn dusha uga tuureen murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayagoo ku eedeeyay inuu nacayb ka dhan ah Muslimiinta abuuro. Imaam masaajid iyo...